Ilay Inspektera Jeneraly Lefitra No Fahatelo amin’ny Manampahefana Ambony Nisy Namono Tao Oganda Tao Anatin’ny Telo Taona · Global Voices teny Malagasy
Ilay Inspektera Jeneraly Lefitra No Fahatelo amin'ny Manampahefana Ambony Nisy Namono Tao Oganda Tao Anatin'ny Telo Taona
Andrew Kaweesi is the latest high-profile government official to be killed in the country.
Voadika ny 02 Avrily 2017 6:10 GMT
Pikantsary tao amin'ny lahatsarin'i Andrew Felix Kaweesi nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Novonoin'olona efa-dahy mitam-piadiana tamin-kerisetra nitaingina môtô (antsoina mahazatra hoe boda boda ihany koa), tamin'ny 17 Martsa 2017 lasa teo i Andrew Felix Kaweesi , Inspektera Jeneraly Lefitra ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Polisy ao Ogandà, sady mpitondratenin'ny polisy ihany koa sady lehiben'ny sampan-draharahan'ny Fampandrosoana ny Maha-olombelona. Vao 48 taona monja ny lehilahy. Nitranga ny fitifirana raha vao niala tao an-tranony tao Kulambiro tanàna itatry ny renivohitra Kampala handeha hiasa izy. Nahafaty ny mpamilin'i Kaweesi , Godfrey antsoina hoe Mambewa, sy ny mpiambina azy, ny kaporaly Kenneth Erau, ihany koa ireo olona mitam-piadiana.
Kaweesi no tompon'andraiki-panjakana fahatelo nisy namono tahaka izany tao anatin'izay telo taona izay. Joan Kagezi, mpampanoa lalàna ambony no voalohany tratran'izany, izay nisahana raharaha lehibe maro. Iray amin'izany ny daroka baomba indroa misesy [fr] tamin'ny volana Jolay 2010, izay nitranga nandritra ny fandefasana ny lalao famaranana ny Amboara Erantany, ary nahafatesan'olona miisa 74 sy nandratrana olona miisa 70 hafa ; nilaza ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ny vondrona mpitolona Al-Shabaab. Tokony hitarika ny fihainoana fijoroana vavolombelona momba ny fomba nanamboarana sy nitondrana ny baomba ho any Kampala i Kagezi, kanefa dia nisy namono tamin'ny 30 Martsa 2015 rehefa nijanona teo amin'ny mpivarotra voankazo iray an-dalana ho any an-tranony. Niaraka taminy ny telo tamin'ireo zanany tamin'io fotoana io; fa tsy nisy naratra.
I Mohammed Kiggundu no manaraka, komandin'ny Hery Demokratika Mpiara-dia teo aloha (ADF), izay vondrona mpikomy tao Ouganda sy tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo. Lasa miaramilan'ny governemanta teo amin'ny folo taona lasa teo i Kiggundu. Tamin'ny volana Novambra 2016, notafihan‘olona mitam-piadiana ny fiarany izay nanao tifitra variraraka tamin'ny bala miisa 40 mahery; maty tsy tra-drano teo i Kiggundu sy ny mpiambina azy.
Nampiasa môtô avokoa ireo olona mitam-piadiana tamin'ireo famonoana telo ireo. Na dia nosamborina aza ireo voarohirohy taorian'ilay famonoana olona roa voalohany, dia tsy mbola nisy na inona na inona nitranga teo anivon'ny fitsarana. Tsy adinon'ireo mpiseran'ny media sosialy mora foana ireo raharaha roa mbola tsy voavaha ireo:
Firenena mora manadino isika. Joan Kagezi, Robinah Kiyingi, mpitondra fivavahana Miozolomana, notifirin'ny tsimatimanota. Tsy nisy fanamelohana/fisamborana naharesy lahatra
Maro ireo mpitondra fivavahana Miozolomana no voatifitra tao Oganda tao anatin'ny folo taona farany; nilaza ny polisy fa misy ifandraisany amin'ny ADF izany . Nosamborina ny mpitarika ny vondrona mpikomy roa taona mahery lasa izay, ary mbola tazomina ao amin'ny polisy. Miombon-kevitra anefa ny mpisera aterineto maro fa tsy olona mpanafika tsotra fotsiny ireo rehetra sahy mitifitra fiara amin'ny bala miisa 80 amin'ny antoandrobenanahary :
Mampieritreritra ny fotoana famonoana. Minia tsy mahita isika raha mieritreritra fa kisendrasendra ireo andian-jiolahin'ny boda boda.
Tao anatin'ny lahatsary azo taorian'ny vonoan'olona farany , ​​re any ambadimbadika any ny feon'ireo olona nidonam-pahoriana manontany hoe nahoana no nisy namono i Kaweesi, raim-pianakaviana sady polisy manana fahatoniana. Manan-janaka telo i Kaweesi, ary mbola eo am-piandrasana ny zanany fahefatra ny vadiny .
Olona voarohirohy miisa 17 eo no nosamborina sy nalaina am-bavany hatreto .
Namoaka fanambarana mikasika ny famonoana tao amin'ny pejiny Facebook ny filoha ao Oganda, Yoweri Museveni:
Noho ireo vonoan'olona miverimberina tao an-tanàndehibe sy tany amin'ny tanàndehibe hafa,
Nandidy ny hametrahana fakantsary avy hatrany any amin'ireo tanàndehiben'i Ogandà sy eny an-dalambe rehetra aho. Efa nikasa hatry ny ela ny hanao izany tetikasa izany izahay kanefa nahemotra izany noho ireo laharam-pahamehana hafa toy ny lalana sy ny herinaratra […]
Nandritra ny fiaretan-tory ho an'i Kaweesi, nilaza ny filoha fa tafiditry ny jiolahy ny sampan-draharahan'ny polisy ary nangataka ny Inspektora Jeneralin'ny Polisy (IGP) izy mba hanaovana fanadiovana ny sampan-draharaha, indrindra ny Sampan-draharaha misahana ny Famotorana Heloka Bevava(CID).
Niresaka momba ny fahafatesan'i Kaweesi ihany koa ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta sy ireo mpitarika ara-politika hafa:
Nilaza ilay mpitarika ny mpanohitra, Kolonely misotro ronono Dr. Kizza Besigye, fa miaina ao anatin'ny fanjakana Mafia izay mampiroborobo ny fikambanan-jiolahy ny Ogandey :
Naneho ny ahiahiny ny mpiseran'ny media sosialy iray :
Tena mampatahotra ny tsy fandriampahalemana eto amin'ity firenena ity. Maty tao anatin'ny indray mipi-maso i Andrew Felix Kaweesi.
Niara-niory tamin'ny famoizana niainan'ny fianakavian'i Kaweesi ny mpisera Twitter iray hafa na dia teo aza ny fisarahana ara-politika (matetika manakana ny fihetsiketsehan'ny mpanohitra ao amin'ny firenena ny polisy ) :
Na dia eo aza izany rehetra izany, tsy naniry an'i Andrew Felix Kaweesi ho faty aho. Raim-pianakavina manana fianakaviana mila tohanana izy.
Nitatitra ny tenin'ny Eveka tao amin'ny fandevenana ny Urban Television :
Bishop Kaggwa: #Kaweesi has left us a challenge & let us go back challenged to transform our communities#RIPKaweesi #PMLIVE Updates. pic.twitter.com/GC7FUBpvv5
Eveka Kaggwa: namela antsika ady sarotra i Kaweesi ary andeha isika hiatrika izany hanova ny fiarahamonina.
Nanamarika ilay mpampiasa Twitter Bernard Sabiti hoe:
Famantarana ny fahatanjahan-tsain'i Kaweesi iray hafa : Tsy nisy afatsy i Annet Kaweesi ihany no ‘mpitondratena’ nahasahy nipoitra. Tsy mahazatra ho an'ny ‘Lehilahy Afrikana ‘
Ao Afrika, tena mahazatra ny mahita ny vadikelin'ny maty manatrika ny fandevenana mba ho fantatry ny olona .
Nizara ny sary mampiseho ny fanetren-tenan'i Kaweesi ihany koa i Sabiti :
Footage of #kaweesi calming down a young, drunk erratic FDC supporter in the run up to the 2016 elections showed his humanity. #RIPKaweesi pic.twitter.com/aJmWuBHPXN
Lahatsarin'i Kaweesi mampitony tanora iray, mpanohana ny FDC mamo mivembena talohan'ny androm-pifidianana taona 2016 izay nampiseho ny maha-olombelona
Tao amin'ny Facebook, nandefa ity hafatra manaraka ity ny gazety Daily Monitor izay manasongadina fa olona tsy mivadibadika i Kaweesi:
Indray mandeha aho nantsoin'ny mpiara-miasa amiko mba hiditra an-tsehatra noho ny fandikan-dalàna fifamoivoizana nataony fa rehefa niantso an'i Afande Kaweesi aho, dia nilaza tamiko tamim-pahatsorana izy fa tsy afaka mandika lalàna hanampiana ny mpanao gazety. Nandidy ilay mpanao gazety mba handoa lamandy izy.
Napetraka hiala sasatra tamin'ny 21 Martsa 2017 ny nofo mangatsikan'i Andrew Felix Kaweesi , tany amin'ny tanindrazany distrikan'ny Lwengo , Oganda. Tsy mbola nisy ny fivoaran'ny raharaha tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra .